Posted by Dr. Nyan at 3:39 PM
ဦးဥာဏ် ဘ၀ဆိုတာ က ဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်.. တခါတလေ မလိုချင်တာတွေ ရတတ်တဲ့ လောကကြီးပေါ့ စိတ်တွေ ညစ်နေတာလား အကိုရေ.. ဘ၀မှာ ပျော်ပျော်နေတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်အကိုရာ...
ရေးသာရေး.. ဒါဟာစိတ်ထွက်ပေါက်ပဲ.း)
အကိုရေ... မတွေ့တာ ကြာပီဗျာ.. စာတွေများ.. အလုပ်တွေများနေလား.. ကြီးမားတဲ့ ရည်မှန်းချက်အတွက် ပေးဆပ်ရမယ်နော် အကို.. ညီကတော့ အဆင်ပြေပါစေ လိုပဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...
ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပါ မောင်ရယ်...
မနက်ဖြန်ဆိုတာ မသေခြာတဲ့လောကကြီးမှာ အတ္တကင်း
စွာ ၊ မာန်မာနကင်းစွာ နဲ့ လူသားတွေအားလုံးအပေါ်
သံသယကင်းစွာနဲ့ ၊တတ်နိုင်သလောက် တရားဘာဝနာ
ပွားများအားထုတ်ပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ တို့နှစ်ယောက်အတူ လက်တွဲနေထိုင်သွားကြမယ်နော်...း)
ကဲ အကိုရေ ဘေးမှာ တဘ၀လုံး ဖေးမကူညီမဲ့ ဇနီးကောင်းတယောက်နဲ့ ချစ်စရာ ရင်သွေးလေး ရှိနေတာ ဘ၀မှာ ဘာလိုဦးမှာတုန်းး)
ကိုဥာဏ်ရေ မ၀ါတောင်ကြီးမီးပုံးပွဲမှာ ကိုဥာဏ်ပုဆိုးပေါင်ပြီးဂလောက်ဂလောက်လုပ်တာ ပုဆိုးရှိသေးရဲ့လား ဟီး
ံHappy Myanmar New Year!
Wish you may have sucess and happiness!
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ ဖြစ်ပါစေ ဦးဥာဏ်။ နောင် မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ တိုင် ချစ်သော မိသားစု ၊ မိတ်ဆွေးများနှင့်အတူ အသက်ရှည်ကကျန်းမာ၍ ပြည်စုံသောဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ..
ဘယ်လို ခံစားနေရလို့ ဒီစာကို ရေးဖြစ်လဲတော့ မသိဘူး။ မေးလဲ မမေးတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အစ်ကို့ဘဝက ကျွန်တော် လိုချင်အားကျတဲ့ ဘဝမျိုးပါ။ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ အလုပ်အကိုင် အားလုံး အောင်လဲအောင်မြင် အများအကျိုးလဲ ဆောင်နိုင်တဲ့ဘဝပဲ။ မိဘကိုဘဲ ပြန်လုပ်ကျွေးနိုင်တယ်။ သာသာရေးအသိလဲ ရှိ၊ တရားဓမ္မအတွေ့အကြုံလဲ ရှိထားတော့ အသက်ကြီးမှ ငါ ဒါတွေ အချိန်ရှိတုန်း မလုပ်ခဲ့ရဘူးလို့ ပြန်နောင်တရစရာလဲ မရှိဘူး။ အားလုံး မျှမျှတတနဲ့ အဆင်ပြေ အောင်မြင်နေတာ အားကျတယ်။ စိတ်ညစ်စရာတွေ ရှိရင် အမြန်ဆုံး ပျောက်ဆုံးပါစေဗျာ။
ကိုဥာဏ် မရောက်တာ ကြာခဲ့ပြီ ၊ ကိုဥာဏ်ကို ညီအစ်ကိုလို ခင်ပါတယ် မ၀ါလည်း မောင်နှမပဲပေါ့။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ကိုဥာဏ်ရေ .... ဘ၀ကို ကျနော်လည်း ရှာဖွေနေပါတယ် အယ်........ ဘ၀က နီးနီးလေးရယ် ကိုဥာဏ်ရေ..... ကိုဥာဏ် သိမှာပါ ကျနော်ရေးတဲ့စာကို......